Nzvimbo iyi (kufanana neyeUnited States dzose) inomanikidzwa kuendesa zvinyorwa zvehupfumi maererano neshoko idzva reVVG iro rinotanga kushanda pa 25 May 2018.
1. Tauriranai mashoko anonzi Stichting Martin Vrijland
Nheyo dzinogona kutaurirana kuburikidza nefomu rekubatana panzvimbo ino.
Chamber of Commerce nhamba: 60411996
Kutanga: St. Caelciliapad 5, 6815GM, Arnhem
2. Data yako inounganirwa nesero ino nokuda kwezvinangwa zvakawanda:
kunyora pawebsite ino
kuisa mhinduro yako
kukwanisa kutumira e-mail kudiresi yako ye-e-mail
kuva nhengo inobhadharwa nenzira yechipo
kuva nekwanisi yekudzivirira kusvika kune dzimwe nyaya
kubhadharira kupiwa chiziviso chakananga chekuonekwa kwechinhu chitsva pane ino yepaIndaneti
kunyoresa kugamuchira tsamba yevhiki nevhiki uye / kana mamwe tsamba
kupa maonero ako mumaonero echisarudzo / sarudzo
nhamba dzekutsvaga pane nhamba dzevakashanyi uye dzinoputika
kutaurirana nemasangano ezveshuwaridhe plugins anoita kuti kugovera imwe nyaya nyore nyore
kuva kukwanisa kugona kana iwe uri kushandisa dhilocker
3. Masangano ayo achakwanisa kugamuchira dunhu rega rekugadzirisa:
Dhawenyu yako inotanga kuchengetwa pabazi rega reMartin Vrijland Foundation.
Uyezve, deta yako inoparidzirwa kune vatatu vemu-plug-in vateresi vanoshandisa deta yako yekugadzira deta, sezvinotaurwa pasi pechinangwa 2. Izvi zvinosanganisira mawendefa anotevera uye saka makambani akavaka aya aya:
Zvinyorwa zvitsvaga Thomas Maier
Imeyili zvinyorwa kune vanyori Gopi Ramasamy
Google Adsense neGoogel Adsense
Social Counter kuburikidza Prisna
Hondo Yenzanga - Pro by Warfare Plugins
4. Nguva iyo data yako yakachengeterwa nayo:
Dhaka yako ichachengetwa uye / kana kushandiswa panguva yawakanyoresa pane ino. Iwe unofanira kunyatsozvinyora iwe pachako uye upe chikumbiro chokubvisa data yako. Nyaya yako yepepanhau uye / kana kugamuchira zvinyorwa zvakananga pamusoro pezvinyorwa zvitsva zvinotumirwa zvichachengetwa chero bedzi iwe wakanyora iwe pachako. Muzviitiko zvose, unofanirwa kushanda nesimba kune yese mazano panzvimbo ino.
5. Kodzero pamusoro pe data yako:
Iwe une kodzero yekuona, kugadzirisa kana kubvisa data. Iwe unewo kodzero yekupikisa kushandiswa kwemashoko ako ega. Unofanira kuita izvi zvisati zvaitika. Kana uchida kuita izvi mushure mekunge, iwe unogona kuita izvi nekunyora nekutumira tsamba pamusoro pekero yepositi yaMartin Vrijland nheyo, sezvakataurwa pa Chamber of Commerce. Zvisinei, kana zvichiita kuti kune chinangwa chakanaka chokuunganidza deta yako, nheyo dzinopa kodzero yekuramba ichishandisa nekuchengetedza iyi data. Hazvisi izvo zvose zvinopesana nehurukuro inopiwa.
6. Mhinduro kumashoko:
Zvose zvaunotaura zvaunyorerwa iwe zvakakwana nokuda kwebhuku rako pachako. Izvozvo zvinoreva kuti mumatambudziko ose iwe unokodzera pane zvaunonyora; kunyange kana izvi zvikaitika zvinotenderwa kuburikidza nekuenzanisa nemukuru wepaiti yekuisa pasi pechinyorwa.
7. Kodzero yekuendesa data yako:
The Martin Vrijland Foundation ine kodzero yekuendesa dheedheni yako kuvanhu vatatu nokuda kwekushandiswa kwekugadzirisa dambudziko kana izvi zvichienderana nemishando inowanikwa panzvimbo ino. Izvi zvinogona kunge zvakadaro, somuenzaniso, nekushandiswa kwepurog-in software iyo inoita zvimwe kuongororwa pane zvinyorwa, asi izvi zvinogonawo kushandiswa pakuchinja mavhisi ebasa remasmail sekutumira kana kushandurwa pamusoro pezvitsva zvatsvaga. Izvi zvinogonawo kushandiswa pakuendesa kune imwe sevha kana kugovera mupiki, somuenzaniso.
8. Kodzero yekubvisa data yako:
Iwe webhusaiti martinvrijland.nl inopa 1 sarudzo yakatarwa iwe unogona kuratidza kuti iwe unoda kuti data yako isasashandiswa zvakare. Izvi zviri pasi pekodzero yekuregera. Unogona kushandisa kodzero yako akasarinwa kunyora noruoko vakanyorwa tsamba kuzviisa pasi chikumbiro chasainwa iwe nokuwedzera gwaro chikonzero ID kadhi kana pasipoti uye Screenshot of yenyu IP kero. Izvi zvinoratidza kuti iwe ndiwe munhu waunoti ndiye. Izvi zvinogona kuitwa maererano nekero yepositi yeMartin Vrijland nheyo, sezvakataurwa paChamboro reRove. Zvisinei, kana zvichiita kuti kune chinangwa chakanaka chokuunganidza deta yako, nheyo dzinopa kodzero yekuramba ichishandisa nekuchengetedza iyi data. Hazvisi izvo zvose zvinopesana nehurukuro inopiwa. Zvinyorwa zvako zvakatumirwa zvichaparara mushure mekunge uonekwe.
9. Simba redu rega data:
Iwe une kodzero yekutumira kunyunyuta pamusoro pekushandisa kwedhesi yako nedare rega rega data. Iri ndiro kodzero yepamutemo. Saka kana uine zvichemo pamusoro pekuti webhusaiti ino inobata sei nedhesi yako yega, iwe unogona kuudza mutemo izvi kune kodzero yemunhu.
10. Kubviswa kwedata:
Kana iwe usingadi kugovera ruzivo rwako kana kana uchida kuchibvisa, haugoni kushandisa mazano anowanikwa pane ino. Mutevedzeri anochengetedza kodzero yekuvhara IP yako kero yekushanyira ino.
11. Kukwana kusingakwanisi:
With aibhadhara nhengo kuti imi mupinde muchimiro yakamisirwa mari pamwedzi, kana kuburikidza yokudzokorora. bhengi kushandisa reperterende PayPal kana inodzokororwa chikwereti kuchinjirwa, shandisa mashoko ako kuti uone kana kuwana zvimwe zvigadzirwa kufukidzwa shoma kuwana. Zvose izvi zvinotungamirirwa kuburikidza ne-automated plug-in, sezvinotaurwa pasi peshoko 3, iro Restrict Content Pro. Dare rako rinoshandiswa kuongorora kana iwe usingakwanisi kuwana zvinyorwa zvinongowanikwa chete nhengo.
12. Tsanangudzo nhengo:
Tsanangudzo yenhengo ndeye: vanhu vakapinda mubhadharo nenzira yemupiro kuMartin Vrijland nheyo yenguva chaiyo kana kusingagumi kuburikidza nedzimwe ruzivo rwemari uye ndiani iyi link tasaina. Kana iwe uri nhengo, unofanira kukwanisa kuwana data yako pasi iyi link. Iwe unogonawo kugadzirisa kana kubvisa nzvimbo yako maererano nehutano hwako ipapo. Nhengo yako inogara ichionekwa sechipo kuna Martin Vrijland nheyo.
Total Visits: 1.506.070
Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
Riffian op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
Marianne op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
Mindsupply op Sei vanhu vazhinji vakakukomberedza vachiita kunge mapofu?
Rose op Utachiona hunoyedza kukanganisa muviri wese nekubira stem cell information